ဒေါ်စောရင် (B.A.,B.Ed. ) (ဆရာဇော်ဂျီ၏ ဇနီး) ရေးသားခဲ့သော အစ္စလာမ်သာသနာ. | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဒေါ်စောရင် (B.A.,B.Ed. ) (ဆရာဇော်ဂျီ၏ ဇနီး) ရေးသားခဲ့သော အစ္စလာမ်သာသနာ.
ဒေါ်စောရင် (B.A.,B.Ed. ) (ဆရာဇော်ဂျီ၏ ဇနီး) ရေးသားခဲ့သော အစ္စလာမ်သာသနာ.
January 17, 2017 drkokogyi
၂၀၁၃ တုန်းက နှုတ်အနေနဲ့ တင်ခဲ့ဖူးတာလေးကို အများ အလွယ်တကူဖတ်လို့ရအောင် စတေးတပ်အနေနဲ့ ပြန်ကူးတင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်မည့် ဒေါ်စောရင် (B.A,B.Ed) (ဆရာဇော်ဂျီ၏ ဇနီး) ရေးသားခဲ့သော အစ္စလာမ်သာသနာ
October 26, 2013 at 11:33am
ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ အစ္စလာမ်(Islam) ဘာသာဟူ၍ ထွန်းကားလျက်ရှိသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ၌ သက်ဝင်ယံကြည်ကြသော မွတ်စလင်တို့သည်လည်း သန်းပေါင်းများစွာ ရှိလေသည်။ ထိုသို့ရှိလာရခြင်းမှာ အာရေဗျနိုင်ငံရှိ မက္ကာမြို့တော်၌ ခြောက်ရာစုနှစ် အတွင်းတွင် ဖွားမြင်တော်မူသော အာရေဗျအမျိုးသား တမန်တော် (Prophet) မုဟမ္မဒ် (Mohammad) ပွင့်တော်မူလာသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
မုဟမ္မဒ်သည် ငယ်ရွယ်နုနယ်စဉ်ကပင် မိမိ ဘထွေးတော်နှင့်အတူ အာရေဗျသဲကန္တာရကို ဖြတ်ကူးကာ ဝန်တင်ကုလားအုပ်များဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင် လိုက်ပါလှည့်လည်တော်မူခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အာရေဗျအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတွင် ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်အနေနှင့် ဆောင်ရွက်တော်မူလေသည်။ မုဟမ္မဒ်သည် သီလသမာဓိနှင့် ပြည့်စုံ၍ သစ္စာတရားကို ကျင့်သုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့် နောင်အခါတွင် ထိုအာရေဗျ အမျိုးသမီးသည် မုဟမ္မဒ်၏ ကြင်ရာတော် ဖြစ်လာလေသည်။
မုဟမ္မဒ်သည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နေစဉ်၌ပင် တရားဓမ္မ၌ မွေ့လျော်တတ်သူဖြစ်လေသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပင် မက္ကာမြို့နှင့် မနီးမဝေး သဲကန္တာရရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုသို့ ကြွတော်မူ၍ ဝိပဿနာ ပွားများတော်မူလေ့ရှိလေသည်။
သက်တော်လေးဆယ်သို့ ရောက်သောအခါ တစ်ညသ၌ မုဟမ္မဒ်သည် တောင်ကုန်းဂူ၌ ဝိပဿနာပွားများနေတော်မူစဉ် “အသင့်ကို မွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်၏ နာမံတော်ဖြင့် အစပြု၍ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်လော့” ဟူသောအသံကို သုံးကြိမ်သုံးခါ ကြားတော်မူလေသည်။ ထိုအခါ မုဟမ္မဒ်သည် ဝိပဿနာပွားများရာမှ ထတော်မူလာလေသည်။ ကြားရသော အသံသည်လည်း စိတ်၌ထင်လျက် ရှိလေသည်။
ထို့ကြောင့် မုဟမ္မဒ်၌ ပြင်းစွာသော တုန်လှုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်လေသည်။ မက္ကာမြို့သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ကြင်ရာတော်သည် မုဟမ္မဒ်အား ရှေးပညာရှိကဝိကြီး တစ်ပါးထံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားလေ၏။ ထိုကဝိကြီးသည် အံ့ဖွယ်သူရဲဖြစ်သော အကြောင်းအခြင်းရာတို့ကို ကြားသိသောအခါ မုဟမ္မဒ်သည် တမန်တော် ဧကန်ဖြစ်လေပြီဟု မိန့်ဆိုလေသည်။
ထိုအခါမှစ၍ တမန်တော်သည် ဝိပဿနာကို ရှုလေ့ရှိ၍ ခြိုးခြံစွာ ကျင့်တော်မူလေသည်။ အလ္လာဟ် (Allah) အရှင်မြတ်၏ တရားတော် ဖြစ်သော အစ္စလာမ်တရားကိုလည်း စတင်ဟောကြားတော်မူလေသည်။ ကြင်ရာတော်သည် အစ္စလာမ်ဘာသာ၌ ရှေးဦး သက်ဝင်ယုံကြည်လာသူ ဖြစ်လေသည်။ သုံးနှစ်ခန့် အစ္စလာမ်တရားကို ဟောတော်မူပြီးသောအခါ အပည့်အမြောက်အမြား ကျွတ်တန်းဝင်ကြလေသည်။
ထို့နောက် တမန်တော်သည် ဒေသစာရီကြွချီလှည့်လည်၍ တရားဟောတော်မူပြန်လေသည်။ ထိုအခါ မက္ကာမြို့တွင် တမန်တော်ဟောကြားသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏တရားကို မနာယူလိုသော သူတို့သည် တမန်တော်အား ရန်ရှာကြလေသည်။ ထိုသူတို့သည် တမန်တော်၏ တပည့်များကို အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်ကြလေသည်။ သို့ရာတွင် တမန်တော်သည် အစ္စလာမ်တရားတော်ကို ဟောမြဲဟောတော်မူလေသည်။ မနာလိုသူတို့၏ အဖျက်အဆီးသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာလေရာ အေဒီ ၆၂၂ ခုနှစ်တွင် တမန်တော်သည် မက္ကာမြို့တော်မှခွာ၍ မဒီနာမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့စံနေတော်မူလေသည်။
ထိုသို့ ပြောင်းရွှေ့စံနေတော်မူသည်ကို ဟိဂျရတ် (Hijrah) ပြုသည်ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုသို့ ဟိဂျရတ်ပြုသောနှစ်သည် အစ္စလာမ် သာသနာ သမိုင်းတွင် အလွန်အရေးကြီးသော နှစ်ဖြစ်လေသည်။ ထိုနှစ်ကို ဟိဂျရီနှစ်ဟု ခေါ်လေသည်။ နှောင်းခေတ် မွတ်စလင်တို့သည် မိမိတို့ သာသနာနှစ်ကို ရေတွက်ရာတွင် ထိုဟိဂျရီနှစ်မှ စ၍ ရေတွက်ကြလေသည်။
တမန်တော်သည် မဒီနာမြို့၌ စံနေတော်မူစဉ်တွင် အစ္စလာမ် တရားကို ဟောတော်မူရာ၊ မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့သည် တရားတော်၌ သက်ဝင်ယုံကြည်၍ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်များ ဖြစ်လာကြလေသည်။ ဟိဂျရီနှစ် ၈ နှစ်တွင် တမန်တော်သည် များစွာကုန်သော တပည့်များနှင့်တကွ မက္ကာမြို့သို့ ဝင်တော်မူလေသည်။ ရန်သူအပေါင်းတို့အား သွေးတစ်ပေါက်မျှ မကျစွန်းစေဘဲ အပြစ်ဟူသမျှတို့ကို ချမ်းသာခွင့် ပေးသနားတော်မူလေသည်။ ထိုအခါမှစ၍ အစ္စလာမ်ဘာသာသည် တစ်စ တစ်စ ပြန့်ပွား၍ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ရောက်လေသည်။
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တို့သည် ဘုရားရှိခိုးကန်တော့သည့်အခါတိုင်း မက္ကာမြို့တော်ဖက်သို့ မျက်နှာမူ၍ ရှိခိုးကြလေသည်။ ဘုရားရှိခိုးရာကျောင်းကို ပလီဝတ်ကျောင်းဟု ခေါ်လေသည်။ တစ်နေ့ငါးကြိမ် ဘုရားရှိခိုးလေ့ရှိလေသည်။ ပလီဝတ်ကျောင်း၏ ထောင့်စွန်းနေရာလေးခုတွင် မျှော်စင်လေးစင်ရှိလေသည်။ ဘုရားရှိခိုးချိန်ရောက်သောအခါ မျှော်စင်ပေါ်သို့ တက်၍ “ဘုရားရှိခိုးကြလော့၊ ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ အလ္လာဟ်အရှင် တစ်ဆူတည်းသာ ရှိတော်မူသည်” ဟူ၍ သတိပေး ကြွေးကြော်လေ့ရှိလေသည်။
ထိုသို့ သတိပေးကြွေးကြော်သံကိုကြားသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အပေါင်းတို့သည် မိမိတို့ ပြုလုပ်နေသော အလုပ်များကို ခေတ္တမျှ ရပ်နား၍ ဘုရားရှိခိုးကြကုန်လေသည်။ ဘုရားရှိခိုးသောအခါ ကြမ်း၌ဖြစ်စေ၊ မြေပြင်၌ဖြစ်စေ ဒူးထောက်၍ လက်ရောနဖူးပါ မြေနှင့် ထိအောင် ရှိခိုးကန်တော့ကြသည်။
တမန်တော်သည် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါက မိမိဟောကြားတော်မူသော တရားသည် အလ္လာဟ်အရှင်ထံမှ ချပေးသနားတော်မူသော တရားမြတ်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောလေ့ရှိလေသည်။ ထိုအခါက စက္ကူဟူ၍ မပေါ်သေးသဖြင့် စွန်ပလွံခေါက်များကို အသုံးပြုကြရလေသည်။ ထို့ကြောင့် စာပေတတ်သူများသည် တမန်တော်ဟောခဲ့သော တရားတော်မြတ်ကို စွန်ပလွံခေါက်များပေါ်၌ ရေးမှတ်သိမ်းဆည်းကြလေသည်။ ထိုတရားမြတ် အလုံးစုံကို ကိုရန် (Quran or Koran) ကျမ်းဟုခေါ်သည်။ (ကိုရန်ဟူသောစကားမှာ အရဗီဘာသာမှ ဆင်းသက်၍ “ဖတ်ရန်စာ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။) ထိုကျမ်းစာ၌ လူခပ်သိမ်းတို့သည် မည်သည့်အမှုကို ပြုအပ်၍၊ မည်သည့်အမှုကို မပြုအပ်ဟူသော ကျင်ဝတ်တရားများပါဝင်ရာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၂၂၅ သန်း (ထိုအချိန်က အရေအတွက်ဖြစ်သည်။) မျှသော မွတ်စလင်တို့အတွက် အထွတ်အမြတ်ထားသော ကျမ်းဖြစ်လေသည်။
မက္ကာမြို့တော်သည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ အထွတ်အမြတ်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့တော်သို့ ရောက်ကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် ကုသိုလ်အထူးရမည်ဟု အယူရှိကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် မက္ကာမြို့တော်သည် မည်မျှပင်ခရီးဝေး၍ မည်မျှပင်သွားရန်ခက်သည်ဖြစ်စေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် အရောက်သွားကြလေသည်။ မဒီနာမြို့သည်လည်း တမန်တော်၏ သင်္ချိင်းတော်ရှိသော မြို့ဖြစ်သဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ အထွတ်အမြတ်မြို့ တစ်မြို့ပင် ဖြစ်လေသည်။
ဤစာပိုဒ်တွင် နဂိုမူရင်းတွင် ပါသည့် စာအတိုင်းကူးယူတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်စောရင် (၁၉၀၆ – ၂၀၁၁) ပြုစုပြီး အငြိမ်းစား ပညာဝန် ဦးချစ် B.A (ဂုဏ်ထူးဆောင်) တည်းဖြတ်သည့် ၁၉၅၂ ခု မေလတွင် စာပေဗိမာန်က ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖြစ် ပြဌာန်းခဲံသော “ကမ္ဘာ့သမိုင်းပုံပြင်များ”စာအုပ် ပထမပိုင်းမှ ဖြစ်ပါသည်။
(မောင်သန်းဝင်း (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ရေးသားသည့် “အစ္စလာမ် ငြိမ်းချမ်းရေးသာသနာနှင့် သူတို့အမြင်” စာအုပ်မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။)
← Your appendix might serve an important biological function after all
အစ္စလာမ်တွေအနေနဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံ နည်း စနစ်ကို အတုယူသင့်ပါတယ်-ဂျူးတွေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လမ်း ကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းသင့်ပါတယ် Defending the faith the modern way →